Welsh oo ka soo jeeda Itoobiya - cadaan iyo muuqaal - video
Iibso opal dabiici ah dukaankeena
Waan ognahay Dabcan Australian Opals. Laakiin dhawr sano oo cusub ayaa loo yaqaan 'apalye' cusub. Welo-ga. Dhagaxankiisu waa caddaan iyo cadad. Sidoo kale leh ciyaar gaar ah oo midab leh. Miisaaniyaddeedu waxay ku taallaa buurta Semien Wollo. Itoobiya gudaheeda. Raadinta dhabta ah ee dhagaxan lama garanayo.
Waxay u egtahay sida ugu dhaqsaha badan 1993
Qaar ka mid ah ilaha xogta ayaa sheegaya in 1993. Waxay ku jirtay suuqyada Nairobi. Engineeriga Geolog Telahun Yohannes ayaa la siin lahaa helitaankiisa. Dr. N. Barot ayaa sheegay in jiritaanka uu ku jiro maqaal lagu daabacay 1994.
Xaddiga 10 ee dhagaxan waxaa laga soo saaray 1997. Laakiin ma aysan aheyn ilaa 2008 si ay u arkaan Isticmaalidda ay dhab ahaantii bilaabato. Isku-shaandhaynta Eyoopal ee Addis Ababa ayaa gooyay 400 Grams. Isla sannadkaas, waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay bandhigyada macdanta caalamiga ah. Waxay ahayd Sainte-Marie, Faransiis. Inkastoo hal sano ka dib, qabqablayaasha Eyoopal waxay soo bandhigeen dhagaxyo 350 ah oo laga gooyey Tuscon Show, USA. Xiddig cusub ayaa ku dhashay.
A naadir dabiici ah oo naadir ah iyo adag tahay in la soo saaro
Wax soo saarkeeda ayaa sii kordhaya tan iyo 2008. Wasaarada Miinada ee Itoobiya ayaa soo warisay in dhowr kiilo oo kilo ah laga soo saaro 2008. Sidoo kale dhowr boqol oo 2009. Ugu dambeynna wax yar ka mid ah tan 2011. Kaliya 5% dhagaxyada ayaa ah tayo ku filan in la iibiyo, 1% waxay haystaan ​​tayada lagu qurxiyo dahabka.
Waxaan ka heli karnaa Welo weerarada silica xididada. 2 oo kaliya 3 m dusha sare. Way adag tahay in la shaqeeyo. Maadaama macdanta aysan isticmaalin qalabka casriga ah. Kaliya dadka degan gobolka ayaa ka faa'iideysan kara lacagahan. Dadwaynuhu waa miyiga. Sidaa darteed waxay isticmaalaan hababka araga. Waa halis in la soo saaro dhagaxyada. Laga soo bilaabo Jannaayo 2011, waxaa jira goob shaqo oo cusub. Heerarka macdanta ayaa u muuqda kuwo ka sii wanaagsan. Waxay dabooli doontaa macdanta xirfadleyda 500. Xukuumadda Itoobiya waxay xukuntay oo la socotay hantidan. Sidaa darteed iibsadayaashu uma ogola inay tagaan beeraha. Ma si toos ah ula dhaqmi karaan caruurta yar yar. Sidaa daraadeed suuqa dhagax ayaa ku yaal meel ka baxsan aagga macdanta.
Welwel Welo Opal
Tags Dabka, Dabka dabka, Opal
dagax weyn Opal
Tags dagax weyn, Opal